ACT NOW | ACT NOW Against Political Violence in Zimbabwe
LAUNCH DECEMBER 2010
SOLIDARITY EVENT IN DENMARK 8th MARCH 2011
SOLIDARITY EVENT IN DENMARK ON MAY DAY 2011
CONFERENCE ON WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION DEC 2011
ZIMBABWE REVIEWED BY CEDAW FEB 2012
Women have always been at the forefront of the struggle for democracy and social justice in Zimbabwe and therefore they are specifically targeted by the regime’s violent campaigns against the democracy movement.
The international campaign ‘ACT NOW Against Political Violence’ has been initiated by the Zimbabwean organisation National Constitutional Assembly and the Zimbabwe Group in the Danish organisation Africa Contact to combat the state sponsored violence against democratic forces, in particular women.
The campaign aims at giving women a political voice without fear for the repercussions and demands equal participation of all Zimbabweans in the transition towards democracy.
Feel free to express your thoughts and comments on the blog or browse through the site to learn more about political violence, watch videos with testimonies from Zimbabwean women, keep updated on the campaign activities, bury yourself in research reports and follow the blog.
Derek Matyszak from RAU comments on the draft constitution
Analysis Campaign events Field stories from Zimbabwe Justice News from Zimbabwe Solidarity events